Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Dalka oo lagu soo dhaweeyay Dalka Jordan – Hornafrik Media Network
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Dalka oo lagu soo dhaweeyay Dalka Jordan
By HornAfrik	 On Dec 8, 2018
Amman (Hornafrik):- Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) iyo wafdi uu hoggaaminayo oo shir looga hadlayo dagaalka ka dhanka ah argagaxisada uga qayb gelayaan dalka Jordan, ayaa lagu soo dhaweeyaya caasimadda dalkaas ee Amman.
Mas’uuliyiin sare oo ka tirsan boqortooyada Jordan ayaa si heer sare ah usoo dhaweeyay ra’iisul wasaare ku-xigeenka iyo wafdiga uu hoggaamiyo oo ay kamid yihiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha XFS iyo saraakiil kale.
Shirkaan oo looga hadlayo iskaashiga kahor tagga argagaxisada ayaa ra’iisul wasaare ku-xigeenku waxa ku matalayaa madaxwaynaha iyo ra’iisul wasaaraha dalka oo lagu casuumay in mid kamid ah uu ka qayb galo hase yeeshee ay uga baaqdeen hawla kale oo muhiim ah.
Kulanka looga hadlayo iskaashiga la dagaalanka argagaxisada oo berry furmaya ayaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa sidii dhaqaale ahaan, ciidan ahaan iyo fikir ahaanba looga hor-tegi lahaa ficillada abaabulan ee kooxuhu ka gaystaan caalamka oo dhan.
Kulanka oo abaabulkiisa uu leeyahay boqorka Jordan ayaa waxaa kasoo qayb galaya madax ka socoto wadamo badan, waxaana la filayaa in ay kasoo baxaan qodobbo muhiim u ah wiiqida ficillada bahalnimada leh ee ay gaystaan kooxaha argagaxisada ah.
Ciidanka ammaanka Soomaaliya oo Gacanta kusoo dhigay xubno ka tirsan Al-Shabaab
Soomaaliland oo u diyaar garowday wada hadalka Soomaaliya